Manorata fanamarihana amin'ny tanana ary avadiho ho lasa lahatsoratra miaraka amin'ny WritingPad | Vaovao IPhone
WritingPad dia fampiharana ho an'ny iPad izay ahafahanao mandray naoty haingana amin'ny alàlan'ny rantsan-tànanao ihany. Manaiky ny sora-tanantsika ilay rindranasa ary raha vao esorinay hiala eo amin'ny efijery ny tanantsika, dia mamerina ireo teny amin'ny soratra an-tsoratra amin'ny fomba marina tsara..
Ho fanampin'izany, asiana fihetsika mba hampandeha haingana kokoa ny fivezivezena: hokasihinay ny teny indroa hisafidianana azy ary intelo hanasongadinana ny fehintsoratra iray manontolo. Raha hamafa teny iray dia mifantina fotsiny ny lahatsoratra izahay ary manosika ny antsika miankavanana miankavia. Ny WritingPad dia misy baiko hafa haingana izay manampy antsika rehefa manoratra antontan-taratasy toy ny mailaka. Ohatra, raha mampiditra haingana ny daty ankehitriny isika dia manoratra "Daty" ary manao faribolana manodidina ilay teny. Amin'izay fotoana izay dia hampidirina ny daty ankehitriny. Tehirizo ny antontan-taratasy iray amin'ny fanoratana ny "Save" ary ny fanodinana azy.
Rehefa manokatra ny rindranasa isika dia afaka manafatra ny mombamomba antsika manokana mba ho marina kokoa ilay rakibolana. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fanekena ny Espaniôla ihany koa ilay rindranasa.
Afaka mahita ianao WritingPad ao amin'ny App Store avy amin'i 2,99 euros.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Soraty amin'ny tanana ny naoty ary avadiho ho lasa lahatsoratra miaraka amin'ny WritingPad izy ireo
AuRe dia hoy izy:
Pablo, misy fahasamihafana kely amin'ny vidiny, tokony hojerenao alohan'ny hamoahana azy. Voucher € 7,99
Misy zavatra mety manapa-kevitra ny hividy ianao dia tonga amin'ny ambaratonga «Tsy hovidiko adala»
Valio amin'i AuRe